Umqeqeshi ucela uxhaso | News24
Umqeqeshi ucela uxhaso
isithombe: nosipho mkhize Umqeqeshi weZwakala FC uSibusiso Ntombela waseNtshongweni.
OWESILISA waseNtshongweni, uMnuz Sibusiso Ntombela onethalente lokudlala ibhola lezinyawo uthe isifiso sakhe ukubona iqembu lakhe liphumelela lize lifike emazingeni aphezulu kwezemidlalo.
UMnuz Ntombela ungumqeqeshi weqembu elibizwa ngokuthi yiZwakala Footbal Club eNtshongweni.
Uthe: “Ngibhalele abe-Hillcrest Fever ngoba ngibone ukuthi iningi labantu emphakathini liyasizakala ngalo leli phephandaba. Ngibone kukuhle ukuthi ngicele usizo lokuxhaswa kwabadlali njengoba ngiwumqeqeshi waleli qembu,” kusho yena.
Uthe esikhathini esiningi kuba nzima uma abadlali beswele njengoba ebuye akhokhe ngemali ayithola etohweni.
Uthe: “Kunzima ngoba iningi labadlali alisebenzi futhi ngibuye ngibambe ama toho engadini. Kwesinye isikhathi ngiyazama ukubasiza ngemali engiyithola ematohweni, kodwa esikhathini esiningi ayenele ngoba abadlali baningi. Nginama qembu amabili okuyi qembu le-open team lapho kungakhethiwe iminyaka bese ngiba neqembu elinabadlali abane minyaka eyi-13 neyi-15 ubudala.”
Uthe kunzima njengoba kumele bekhokhele onompempe nabanye abasuke belekelela emidlalweni.
Uthe: “Imidlalo eminingi siyazi hlelela yona ukuze kugqugquzeleke abadlali futhi beqhubekele phambili nokudlala ibhola lezi nyawo. Sihlanganisa imali ukuze sithenge izindondo nezitifiketi zabadlali.
Uqhube wathi akafuni imali emphakathini kepha unxusa ukuxhaswa ngomfaniswano webhola (soccer kit) kanye nokunye okudingakalayo ebholeni.
Uma kukhona onothando lokuxhasa iZwakala Football Club engashayela uMnuz Sibusiso Ntombela enombolweni ethi: 063 363 7818.